10 Fahadisoana momba ny dia tokony halavirinao any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Fahadisoana momba ny dia tokony halavirinao any Eropa
Fotoana famakiana: 7 minitra(Last Nohavaozina: 13/11/2020)
Raha mikasa ny dia voalohany any Eropa ianao, misy zavatra vitsivitsy tokony ho fantatrao indrindra tanàna tsara tarehy eto amin'izao tontolo izao. izahay dia namolavola ny torolàlana lavorary an'ny 10 hadisoana amin'ny dia tokony halavirinao any Eropa. Fitsangatsanganana any amin'ny tanin'ny lapa, nahandro mahafinaritra, valan-javaboary, ary tanàna mahafinaritra, mety ho iray amin'ireo fialan-tsasatra tsy hay hadinoina indrindra azonao. Mifanohitra amin'izay aza, mety hivadika ho angano ratsy fanahy koa izy ary hisy fiafarany ratsy, raha tsy voaomana tsara ianao.
Na mandeha voalohany any Eropa ianao na miverina, ireo toro-hevitra ireo dia hahatonga ny dianao ho azo antoka, mahazo aina indrindra, ary epiko tokoa.
1. Tsy mitsidika tanàna kely sy toerana tsy voakapoka
Raha ny dia voalohany ataonao any Eropa, avy eo ianao dia tena mankany amin'ny toerana resahin'olona rehetra. Na izany aza, raha te hahita Eropa manokana ianao, then not visiting small villages and known cities are one of the travel mistakes to avoid in Europe. You should plan your trip to the most unforgettable off the beaten path places in Europe.
Mazava ho azy, raha te hahita sy hanana sary mitovy amin'ireo mpizahatany an-tapitrisany maro hafa eny an-dalambe ao Paris ianao, Milan, sy Prague, avy eo araho ny vahoaka. fa, raha manana ny fanahin'ny mpikaroka ianao, ary mitady ireo vatosoa miafina, avy eo alamino ny dianao manodidina ireo tanàna kely sy tokana any Eropa.
Ny vidin'ny fiaran-dalamby any Florence mankany Milan
Ny vidin'ny fiaran-dalamby any Florence mankany Venise
Vidin'ny lamasinina any Milan mankany Florence
Venice mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby any Milan
2. Fahadisoana momba ny dia tokony halavirinao any Eropa: Tsy fampiasana fitateram-bahoaka
Ny iray amin'ireo zavatra voalohany tonga ao an-tsainao rehefa mandre ianao fitateram-bahoaka, be dia be sy bisy mafana, filaharam-be, ary fifamoivoizana. Na izany aza, ny fitateram-bahoaka any Eropa dia tsy fiara fitateram-bahoaka ihany fa fitaterana sy lamasinina. Ny mpizahatany sasany dia aleony manofa fiara, avy eo miverina, fa ny fitateram-bahoaka any Eropa tena mahazo aina, marim-potoana, levitra, ary atoro.
Afaka mahatratra ny faritra lavitra indrindra any Eropa ianao, tahiry voajanahary mahavariana, trano fiarovana, ary mahatalanjona ny fomba fijeriny, lamasinina. Tsy misy fomba tsara lavitra hivezivezy eran'i Eropa noho ny amin'ny lamasinina, io no fotoana sy mpanangom-bola tanteraka.
3. Tsy mahazo fiantohana fitsangatsanganana
Eny, Eoropa tanàna dia iray amin'ireo tanàna mandroso sy azo antoka indrindra eto an-tany. fa, mbola olombelona ihany ianao, ary ny hantsana any amin'ny valan-javaboary eropeana dia mideza sy tsy misy indrafo. Na dia mety ho mpandehandeha mpandeha za-draharaha indrindra aza ianao, mbola mahazo sery ianao, manolana kitrokely, na angalarina ny fakantsarinao.
Ny fiantohana fitsangantsanganana any Eropa dia zava-dehibe amin'ny antony ara-pahasalamana sy hafa. Mahazo fiantohana amin'ny dia any Eropa dia tsy maintsy atao, ary tsy tokony hamonjy amin'ny filàna toy izany ianao. Ny tsy fahazoana fiantohana fitsangatsanganana dia hadisoana tokony hialanao rehefa mandeha any Eropa satria mety handoa vola kely ianao.
Marseilles mankany amin'ny Lyon Train Prices
Vidiny any Paris mankany Lyon
Lyon mankany amin'ny vidin'ny lamasinina any Paris
Lyon mankany Avignon Train Prices
4. Fahadisoana momba ny dia tokony halavirinao any Eropa: Tsy mividy tapakila mialoha
Eropa dia lafo. Na dia mandeha amin'ny toerana mora vidy indrindra aza ianao, ny tranombakoka sy ny tapakila mahasarika dia handanianao vola kely. Ny tsy fividianana tapakila mialoha dia iray amin'ireo hadisoana lehibe tokony hialana any Eropa, ireo mpizahatany an-tapitrisany mitsidika an'i Eropa isan-taona, dia hanome antoka anao izany.
Noho izany, afaka mahita fifampiraharahana tsara ho an'ireo tranokala malaza any Eropa ianao, attractions, sy ny fiaraha-mientana, raha mikaroka sy mamandrika mialoha ianao. Indraindray ianao dia afaka mahazo fifanarahana tena lehibe amin'ny alàlan'ny mividy tapakila an-tserasera, ary mamonjy anao fotoana sarobidy tokoa amin'ny dianao. Ankoatry ny, raha ny dia voalohany nataonao tany Eropa, tokony ho vonona amin'ny filaharana lava ianao. Noho izany, ny fividianana tapakila fitsangatsanganana sy fisarihana an-tserasera dia hamonjy anao tsy hijoro amin'ny orana mirotsaka, andro fahavaratra mafana, ary mamela anao fotoana amin'izany hevitra sy fitsangatsanganana.
5. Manakalo vola amin'ny seranam-piaramanidina
Ny fitsangatsanganana any an-tany hafa dia mety hampahory, tsy miteny ny fiteny na mahita ny lalanao manodidina ny tanàna. Ny fiatrehana ny teti-bolanao sy ny vola vahiny dia mety hampahory ihany koa. Mandritra ny fifanakalozana vola eny amin'ny seranam-piaramanidina dia tena mahazo aina sy azo itokisana, izy io dia iray amin'ireo hadisoana amin'ny dia tokony hialana any Eropa.
Ny sarany azonao mandoa sy mifanakalo vola dia handany anao, noho izany dia tsara kokoa ny manao fikarohana amin'ny Internet amin'ny eteboka xchange. koa, afaka manontany foana ianao ao amin'ny fandraisan'ny hotely anao, ho faly izy ireo manoro isa azo antoka vola ao amin'ny faritra. Soso-kevitra ny hanakalo sahaza ny dia amin'ny seranam-piaramanidina, ary vola izay hanarona ny voalohany 1-2 andro amin'ny dianao.
6. Famandrihana azo alaina ao amin'ny mpiara-monina ratsy
Ny toerana dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny famoronana ny fialantsasatra tonga lafatra any Eoropa. Tsy manao ny fikarohana ataonao amin'ny faritra tsara indrindra amin'ny tanàna, fiarahamonina, na tanàna honenana, dia lesoka hialana rehefa mandeha any Eropa. Ny fisafidianana ny toerana onenanao dia zava-dehibe toy ny fisafidianana ny karazana onenana. Ny fijanonana any amin'ny faritra tsy mety amin'ny tanàna dia mety handanianao fotoana amin'ny dia, fifamoivoizana, vidiny, sy fiarovana.
7. Fahadisoana momba ny dia tokony halavirinao any Eropa: Mihinana ao amin'ny trano fisakafoanana voalohany hitanao
Raha mpizahatany mahazatra ianao, avy eo ianao handeha ho any amin'ireo rojom-pisakafoanana haingam-pandeha ho an'ny sakafo atoandro na trano fisakafoanana voalohany eny an-dalana. Na izany aza, mety tsy hahita trano fisakafoanana mahavariana ianao, miaraka amin'ny lovia sy fomba fijery mahafinaritra eto an-toerana izay haka aina.
Raha manokana fotoana hanaovana fikarohana ianao alohan'ny dia, hikarakara ny tenanao amin'ny traikefa nahandro tsy hay hadinoina ianao. afa-tsy, ny manandrana sakafo matsiro, afaka mamonjy dime vitsivitsy ianao, fa tsy misolelaka ao amin'ny trano fisakafoanana voalohany manodidina. Kafe mahafinaritra, mofomamy, nahandro eo an-toerana, ary lovia manaitra amin'ny sarany mampihomehy, mety ho eo an-jorony fotsiny.
8. Mifikitra amin'ny boky torolalana fa tsy fitsangantsanganana an-tanàn-dehibe
Ny boky mpitari-dalana dia loharanom-panentanam-panahy lehibe ho an'ny dia any Eropa, sy ny fananana drafitra fitsangatsanganana ankapobeny. Na izany aza, Ny fifikirana amin'ny bokinao dia iray amin'ireo hadisoana lehibe indrindra tokony hizorana any Eropa. Midika izany fa hitsidika ireo toerana mitovy amin'ireo mpizahatany hafa an-tapitrisany ianao, ary toy ny mpizahatany.
Mahita ny tanàna amin'ny a fitsangatsanganana an-tongotra maimaimpoana no fomba tsara indrindra hankafizana ireo tanàna mahafinaritra any Eropa. Ny mpitari-dalana anglisy miteny anglisy eo an-toerana dia hitondra anao manodidina ny tanàna. Ho fanampin'ny fampisehoana tranokala malaza sy malaza, ny mpitari-dalana fitsangatsanganana an-tanàna dia hilaza aminao ny tsiambaratelo voatahiry tsara indrindra ao an-tanàna ary hanome anao tolo-kevitra sy toro-hevitra ho an'ny tanàna. Anisan'izany tolo-kevitra momba ny sakafo, fifanarahana mahafinaritra, toerana miafina, ary ny tena zava-dehibe dia ny fomba hijanonana ho azo antoka.
9. Fahadisoana momba ny dia tokony halavirinao any Eropa: Tsy fonosana ho an'i Eropa
Sunny, rainy, nangatsiaka, na mando, iray amin'ireo zavatra manokana mampiavaka an'i Eropa dia ny fahafahanao miaina ny rehetra 4 vanim-potoana ao anatin'ny iray andro. Noho izany, ny tsy famonosana manokana ny toetrandro any Eropa dia hadisoana amin'ny dia mba hisorohana amin'ny sarany rehetra.
T-shirts, orana sy palitao rivotra, Ny kiraro ahazoana aina dia tena ilaina amin'ny entana ho an'ny dianao any Eropa. Ny tsara indrindra dia ny manangona sy manao sosona, amin'ity fomba ity dia hahazo aina ianao amin'ny toetrandro rehetra, ary tsy hitondra manodidina ny fitafiana iray manontolo.
10. Ny fitazonana ny volanao amin'ny toerana iray
Fantatra fa mahavariana ireo tanàna eropeana, fa koa ho an'ny pickpocketing, fandrika mpizahatany, sy tetika isan-karazany hamitahana ny mpizahatany. Ny fitsinjarana ny teti-bidinao ny dia-nao bag, azo antoka, ary ny carte de crédit no fomba tsara indrindra handehanana soa aman-tsara sy hankafizinao.
Ny tsara indrindra dia ny mijanona eo amin'ny lafiny azo antoka ary aza atao ny mitazona ny vola sy ny carte de crédit anao amin'ny toerana iray. Noho izany, manana ny fanananao sarobidy aminao amin'ny fotoana sy toerana rehetra, dia hadisoana amin'ny dia tokony hialanao any Eropa.
Hamaranana, misy toerana mahafinaritra maro hita any Eropa. Afaka mandany faran'ny herinandro mahatalanjona ianao na mikasa ny dia lavitra any Euro, ny fahafaha-manao tsy misy farany. fa, rehefa mandeha any an-tany hafa ianao, ny fitsipi-dalao dia miovaova arakaraka ny tanàna. Ny zavatra sisa tsy miova dia ny lesoka ataon'ireo mpizahatany isaky ny mandeha. Our 10 hadisoana fitsangatsanganana hialana any Eropa, hiaro anao soa aman-tsara ary hanao ny dia tsy manam-paharoa.
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy anao drafitra ny fialan-tsasatra any Eropa izay nofidinao tamin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny lahatsoratry ny bilaoginay hoe "10 Fahadisoan-dàlana tokony hialanao any Eropa" amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url =ny https://www.saveatrain.com/blog/travel-mistakes-avoid-europe/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, ary azonao atao ny manova ny / pl ho / tr na / de sy fiteny maro hafa.